डाक्टरले अपरेशन थिएटरमै नर्सलाई किस गरेको , भिडियो भाइरल भएपछि जागिर गयो (भिडियो)
काठमाडौं । भारतको मध्यप्रदेशमा एक डाक्टरले सहकर्मी नर्सलाई किस गरिरहेको भिडियो भाइरल भएपछि डाक्टरलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको छ । मध्यप्रदेश राज्यको उज्जैन जिल्लाको एक अस्पतालका ती डाक्टर सिभिल सर्जन भएको बताइएको छ । उनले अपरेशन थिएटरमा नर्सलाई किस गरिरहेका थिए । उनले नर्सलाई किस गरिरहेको भिडियो कसैले खिचेर भाइरल गरिदिएको थियो । भिडियो बाहिरिएपछि उनलाई पदबाट बर्खास्त गरिएको हो ।
ती सिभिल सर्जन र नर्सको चुम्बन गरिरहेको भिडियो सोसल मिडियामा भाइरल भएपछि उनीहरुलाई पदबाट हटाइनुपर्ने माग अत्यधिक बढेको भारतीय मिडिया आज तकले लेखेको छ । यसमा तत्काल कारवाही गर्दै उज्जेन जिल्लाका कलेक्टरले डाक्टरलाई पदबाट बर्खास्त गरेका छन् । ‘मैले उनलाई जिल्ला अस्पतालको सिभिल सर्जनको पदबाट हटाएको छु,’ कलेक्टर शशांश मिश्राले जानकारी दिए । ती सिभिल सर्जनको सट्टामा डा. पिएन वर्मालाई नियुक्त गरिएको उनले जानकारी दिए ।
अपरेशन थिएटरमा चुम्बन गरेको घटना सार्वजनिक भएपछि जिल्लाका मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डा. मोहन मालवीयले घटनालाई निकै गम्भीरतापूर्वक लिएको र यसको अनुसन्धानको आदेश दिइएको जानकारी दिए । जिल्ला स्वास्थ्य अधिकारी डा. मोहन मालवीयले भिडियोमा देखिएकी महिला अस्पतालकी नर्स भएको र उक्त चुम्बन अपरेशन थिएटरभित्र गरिएको उनले बताए । महिलासँग सोधपुछ भइरहेको बताइएको छ ।
कसरी रहन गयो माघे संक्रान्ति जान्नुहोस